Mining Industry CMC rinoshandiswa sezvo pelletizing bhainda uye mwoyo mumiririri mune migodhi indasitiri. The mbishi pellet yakaitwa CMC ane zvakanaka Anti-kuputika waivako dzakakwirira kumanikidzwa uye akawira simba akaoma uye nyoro pellets. Zvichakadai, unogona kuvandudza mugiredhi pellets. Muna pellet chikumbiro, CMC anogona kuita ine sphericity zvakanaka, kumanikidzwa nemishonga, deformation nemishonga, vakapararira zvakanaka, simba akanyorova pellet, mukuru Anti kuputika tembiricha, simba kugona kudzora uye rel mukuru ...
Muna pellet chikumbiro, CMC anogona kuita ine sphericity zvakanaka, kumanikidzwa nemishonga, deformation nemishonga, vakapararira zvakanaka, simba akanyorova pellet, mukuru Anti kuputika tembiricha, simba kugona kudzora uye kuregedza mvura iri pellet uye zvakanaka metallurgia unongotaura mukuru.
In sulfide flotation, CMC anogona yekudyidzana chiwedzere wettability kuti talc granule uye ndoziva flotation kupatsanurwa sulfide esimbi uye talc.
CMC rinoshandiswa sezvo silicate gangue FIs kutitadzise kutungamirira kuparadzana yemhangura uye kutungamirira. Uye dzimwe nguva rinoshandiswa senzira dispersant kuti nebhitumini.
The mhando migodhi indasitiri: IP50 uye IP100
Previous: mushonga wemazino Industry